JustControl.it: Nchịkọta data nchịkọta akpaaka n'ofe ọwa | Martech Zone
Ahịa ahịa dijitalụ bụ mkpa maka ịmewanyewanye ahazi: isi mmalite data ọhụrụ, njikọta ọhụụ nke mmekọrịta, ọnụọgụ mgbanwe na-agbanwe agbanwe, ihe ngosi UA dị omimi, wdg. granular.
Ọ bụ ya mere ndị ọkachamara na-aga nke ọma na ndị na-achọsi ike iji nwee ike ịme ihe iji rụọ ọrụ iji dozie ọnọdụ dị mgbagwoju anya na foto dị mgbagwoju anya. Agbanyeghị, ọtụtụ ngwaọrụ dị ugbu a ka na-enye usoro 'otu-ụzọ-niile' nke ochie. N'ime usoro mbu a, eburu ụzọ mee atụmatụ ịre ahịa ọ bụla site na mbido, na-enweghị ohere ikpuchi ihe mmadụ chọrọ n'otu n'otu. N'otu oge ahụ, ekwensu nọ na nkọwa.
N'ikwekọ, ahịa nke oge a chọrọ igbe ngwá ọrụ karịa ngwaọrụ, ka ndị ahịa wee nwee ike ịmepụta iwu nke aka ha, usoro data, usoro, wdg.
JustControl.it, ihe ngwọta ọhụrụ maka nyocha data dị elu, bụ nnwale iji mejupụta oghere a. Na mpempe akwụkwọ a, a na-enye nkọwa dị mkpirikpi nke ngwa ọrụ ọhụụ ọhụụ maka ahịa dijitalụ. Iji gosipụta ikike JustControl.it nwere, isiokwu a nwere ọtụtụ ihe atụ bara uru banyere otu esi enweta, usoro, yana gbanwee data.
JustControl.it ka etinyere ya ka ọ bụrụ ihe ngwọta nke na-eme ka ụlọ ọrụ azụmaahịa nwee ike ijikwa njikwa zuru oke na mmefu mgbasa ozi, nyochaa arụmọrụ mkpọsa gafee ọwa dịgasị iche iche mara mma, ma mepụta akụkọ ọdịnala emere n'oge. Ka o siri dị, ọ na-ekwe nkwa njikwa ETL dị mma na ikike akpaaka maka eserese data dabere na ọtụtụ isi mmalite na otu UI.
Ugbu a ndị otu JustControl.it na-ekwu na enwere ike ijikọ data data 30 ozugbo maka ndị ahịa ya.
N'otu oge ahụ, onye ọkpụkpọ ọhụrụ ahụ na-ekwusi ike na ọ nwere ike rụọ ọrụ data ọ bụla na-achọ ngwa ngwa. Ndị ahịa ya emeela ma kọwaa ya. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ijikọ nke ọhụrụ, ọ ga-ejikọ n'efu. Typicaldị njem ndị ahịa na usoro ịbanye, dị ka JustControl.it, si lee ụzọ a.
Ozugbo a nyefechara nnọkọ ngosi, otu JustControl.it gwara onye ahịa ka o mejupụta nkenke iji kpuchie nkọwa niile nke data data ma jikọta isi mmalite ndị metụtara akaụntụ JustControl.it ha.
Mgbe nke ahụ gasị, a haziri ihe atụ - yana ihe niile metụtara ya - ma hazie ya.
Ozugbo a nụchara akụkọ ahụ, a na-eme akụkọ sitere na omenala. A na-enyochazi nsonaazụ ya megide ọnụ ọgụgụ ndị ahịa.
N'ikpeazụ, a na-emeju ihe ndị ọzọ eme.
Emepụtara JustControl.it ọ bụghị ogologo oge gara aga. Ọ bụ ya mere na e bipụtabeghị ọtụtụ nyocha ọha na eze ruo ugbu a. N'otu oge ahụ, enwere ugbua ụfọdụ mma nzaghachi dị. Ndị ụlọ ọrụ ahụ depụtara ntụkwasị obi nke akụkọ data raw, ikike ịhazi oke nke metụtara nhazi data na nkewa, yana mma.
Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ile anya otú JustControl.it kwesịrị inweta nyocha ndị ahụ dị mma.
JustControl.it Ike Nhazi data
Dabere na ndị otu JustControl.it, azịza ha nwere ike ọ bụghị naanị iwepụ data raw 'dịka ọ dị', kamakwa nke ihe ndị ọzọ.
Nke mbu, igbe oru ahihia na-ewepu data. Na aha mkpọsa, mkpado maka mba, ndị njikwa, na nyiwe nwere ike ịmata. A na-azọrọ na, na JustControl.it, enweghị mgbochi ọ bụla ụdị mkpọsa ọ bụla. A na-ekwe nkwa ọnụọgụ omenala na nzacha a na-akparaghị ókè maka ha, yana ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke ogidi, ma ndị KPI na metrik. Metadata mmịpụta abụrụla nke ezigbo.
Mgbe nke ahụ gasị, ndị njikwa, nyiwe, ndị njikwa, wdg na-ehichapụ data ahụ.
Na nke atọ, enwere ike ịgbakwunye ma jikọta ozi metụtara uru sitere na ndị na-eso ụzọ na / ma ọ bụ n'ime BI.
Ozugbo agbakwunyere data dị otú ahụ, enwere ike ịgbakwunye ama gbasara isi mmalite na data 'mkpado' ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, a na-edozi nzacha site na mba na nyiwe gafee isi mmalite niile jikọtara. N'ihi ya, a na-emepụta otu eserese dabere na mpempe data dị iche iche. Nke ahụ bụ ikwu, enwere ike ịme akụkọ iji mee mkpebi.
Banyere ọdịdị na mmetụta dị ugbu a nke ihe ngwọta ahụ, enwere ike igosipụta ihe atụ nkọwa ndị na-esonụ.
General dashboard nwere ike data data:
General dashboard na nhọrọ nke akara ngosi ọdịnala kachasị amasị:
General dashboard na a sample nke omenala ihe etinyere
JustControl.it na-egosipụta na ikike ịhazi nke ikike ndị a kpọtụrụ aha n'elu bụ enweghị njedebe. Na ngalaba na-esote, ị ga - ahụ atụmatụ nke na - enyere ike a aka enweghị ikike.
JustControl.it Isetịpụ Ihe Nlereanya
Nke a ikpe dabere na omume rụrụ site a mgbasa ozi ịzụ ahịa gị n'ụlọnga iji Olee ihe enyemaka 40 isi mmalite, gụnyere Ngwaọrụ tracker na netwọk. JustControl.it jiri aka kee akụkọ abụọ na-ekpuchi mkpa ndị ahịa.
Akuko mbu bu nsonaazụ nke nhazi data a na arụ ọrụ: data agwakọtara agwakọta metụtara mmefu mgbasa ozi gafee isi iyi ọ bụla. Ọ na-edozi data niile n'ozuzu ya mgbe ọ na-ewere njirimara ya (dịka otu ndị metụtara ya na ndị ahịa, ọwa, wdg).
Nkwupụta nke abụọ chọrọ ịnye foto nke na-agaghị emeso data raw, mana yana ọnụọgụ ọnụọgụ - ndị a na-agbakọ na ntụpọ ma dabere na usoro ịhazi. Ọnụọgụ nke usoro metrik gụnyere akụkụ ndị a.
Iji mee ka o kwe omume, otu JustControl.it mepụtara usoro pụrụ iche nke omume gosipụtara n'okpuru.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ọ bụ JustControl.it kwado otu na na-ewu nhazi data a na-aga. Agbanyeghị, onye na - eweta azịza na - eche na, obere oge gasịa, ikike a ga - adị maka ndị ahịa ka ha nwee ike iwulite ha n'onwe ha.
Ugbu a, otu ọnwa free ikpe dị. Agencieslọ ọrụ dijitalụ na ndị mmepe ngwa nwere ike ịtụ ihe ngosi ma nwalee ya n'onwe ha na JustControl.it. Ka ndị ahịa JustControl.it nwere, ụzọ ndị ọzọ ha ga-etinye maka ojiji ozugbo.
Ihe ntinye data nke ugbua gunyere Google, Facebook Ads, TikTok, CSV, Excel, YouAppi, AD Colony, adcash, Adperio, ADSKEEPER, Adsterra Network, Affise, AppSamurai, APPLIFT, ngwa, AppsFlyer, mezie, BeaverAds, Chartboost, Clickadu, EngageYa, ExoClick, Fyber, IronSource, Liftoff, mgid, VK, Yandex Direct, MyTarget, PropellerAds, Remerge, Revcontent, RichPush, Snapchat, Tapjoy, UNGADS, ADS Unity, Vungle, Mintegral na Zeropark.
Tags: Ọchịchị ADadcashkpatụAdperioADSKEEPERNetwọk AdsterraAdsterra_netwọkEgoNgwa SamuraiNA-EMEngwaNgwa FlyerAppSamuraingwaAttributionnjirimara analysisBeaverAdsChartBoostPịacross-channel njirimaraCSVGbanweeexcelexoclcknwepuFacebookfacebook mgbasa ozieririgoogleIron_SourceIghanaeme.nbjnwepumgMintegralmyTargetMgbasa OziCheghariaNa-atụgharị ucheRichPushsnapchatTapawaTikTokTwitterAKGKỌịdị n'otu ADSịdị n'otuvkVoluumVungleYandexYandex DirectNwunyeZeropark